Vanhu Vopengera VaMudede kuMasvingo – 263AfricaNews-Patrick_Manase
Vanhu Vopengera VaMudede kuMasvingo
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nenzvimbo nhatu chete dzakatarwa nebazi raRegistrar General dzekuti vanotoresa zvitupa nemagwaro ekuberekwa kwevana vavo pasi pechirongwa che Mobile Registration chakapaurwa svondo rapfuura.
Vagari ava vanoti hurumende yakatara nzvimbo shoma kuitira kuti vagari vatadze kutora zvitupa kuitira kuti vazotadza kunyoresa kuvhota musarudzo gore rinouya.
Nzvimbo dzekutorerwa zvitupa pasi pechirongwa ichi dziri paRunyararo Primary School, Mucheke Hall ne Rujeko muguta rine mawadhi gumi.
Mumwe mugari, Amai Yeukai Marimbe, vanoti izvi zvichaita kuti vechidiki vazhinji vatadze kuwana zvitupa zvinodiwa pakunyoresa kuvhota.
VaGibson Murinye, avo vanogara mumusha we Rodhene, vanoti dai nzvimbo dsekutoreswa zvitupa dzawedzerwa sezvo dhorobha ravo riine vechidiki vakawandisa vanoda kutora zvitupa kekutanga.
Chirongwa ichi chinoitwa muMasvingo kutanga musi wa 22 kusvika musi wa 30 Mbudzi.
Kumaruwa sepachikoro cheZvehuru vanonyoresa vachaita mazuva matanhatu kubva musi wa 18 kusvika 24 Gunyana zvaita kuti vemapato anopikisa vati ve Zanu PF vari kushandisa bazi raVaTobaiwa Mudede kuti vape mukana vatsigiri vavo mazuva akawanda ekunyoresa kumaruwa.
Sachigaro we MDCT muMasvingo, VaMuranganwa Chanyau, vanoti zviri pachena kuti bazi raVa Mudede rinoda kubatsira Zanu PF kuzobira pasarudzo.
Mutungamiri webazi rinotoreswa zvitupa muMasvingo, Amai Stembeni Chitsa, varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti inoda VaMudede avo tisina kukwanisa kubata.
Asi mumwe mutsigiri we Zanu PF, Tatenda Huruva, anoti vagari nevatsigiri vemapato anopikisa vanochema nhando uye kutsvaga uta nemugate.
Asi mukuru we sangano reMasvingo United Residents and Rate Payers Alliance, VaAnoziva Muguti, vanoti vari kuzoendesa bazi iri kudare redzimhosva, sezvo zvariri kuita kuri kutyora kodzero dzevagari.
Gore rega rega hurumende inoita chirongwa che mobile registration senzira yekurerutsira veruzhinji nekupinda munzvimbo dzinogara vanhu kuti vatore zvitupa nemagwaro ekuberekwa.
← Fans condemn Chiyangwa decision
Zim pageant director Tare Munzare demands apology from SA police minister →
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikumi 27, 2017
Amai Makarau Vanoti Hazvisi Nyore Kuita Basa reSarudzo muZimbabwe